Paikady Hanamafisana Ny Teny Pisbi sy Potón Ao El Salvador Amin’ny Alalan’ny Fandraisana Anjaran’ny Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Paikady Hanamafisana Ny Teny Pisbi sy Potón Ao El Salvador Amin'ny Alalan'ny Fandraisana Anjaran'ny Fiarahamonina
Voadika ny 25 Avrily 2017 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, ଓଡ଼ିଆ , Español
Sary nahazoana alalana avy amin'ny CCNIS,.
Ity no fanavaozam-baovao momba ny tetikasanay, tetikasa nahazo vatsy tamin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny teny tompotany. Mamoaka lahatsoratra manasongadina ny fivoarana vita ireo nomem-batsy tamin'ity tetikasa ity.
Na dia be mpampiasa ao amin'ny faritra andrefan'i El Salvador aza ny teny Nahuat noho ny ezaka fanamafisana ny fanohizana azy sy izy ampiasain'ny vahoaka Nahua Pipil, tsy tahaka izany kosa ny teny tompotany ho an'ny vahoaka Lenca sy Kakawira.
Anisan'ny paikady hifandraisan'ny firenena tompotany mifantoka amin'ny fanamafisana ny mari-panondroana ara-kolontsaina sy ny maha zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina ny dingana natomboky ny Vaomiera Mpandrindra Nasionaly ny Tompotany Salvadoriana (CCNIS) amin'ny fanamafisana ny teny Pisbi sy Potón.
Izany no mahatonga ny fanamby tsy maintsy atrehina ao anatin'ny rafi-pikambanan'ny fiarahamonina, mandritra ny dingana fianarana ilàna ireo zokiolona amin'ny fampitàna ny teny, ny fahalalana sy ny fahendrena ho an'ny tanora eo amin'ireo Mponina Tompotany roa ireo. Zava-dehibe ihany koa ny manangana fepetra ilaina hanombohana ity dingana ity, izay ahitana famokarana indray ny bokikely fianarana, ny fizarana azy amin'ny fiarahamonina ary ny fampandrosoana ny fomba fiasa sahaza ara-kolontsaina hampianarana sy hanamafisana ny mari-panondroana ara-kolontsainan'ny Mponina Tompotany tsirairay avy.
Sary nahazoana alalana avy amin'ny CCNIS.
Mankasitraka ny fanohanan'ny tetikasa Rising Voices ny CCNIS, fanohanana nanampy betsaka tamin'ny fanombohana ny dingana natao tao anatin'ny fiarahamonina ary hohamaroinaa indray any amin'ny faritra arakaraka ny Mponina Tompotany tsirairay avy, ary hatomboka ho an'ny vahoaka Nahuat Pipil ny dingana sahala amin'izany ihany.
Sary nahazoana alalana avy amin'ny CCNIS ny famoahana azy.
Azia Atsinanana 19 ora izay
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 ora izay